Gabadha uu dhalay Trump iyo tan la dhalatay Kim Jong-un oo meel isugu tagaya | Raadgoob
Gabadha uu dhalay Trump iyo tan la dhalatay Kim Jong-un oo meel isugu tagaya
February 7, 2018 - Written by admin
Labo xubnood oo ka kala tirsan qoysaska madaxweynayaasha Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo aad isu neceb ayaa isugu tagaya hal goob, waxaana laga yaabaa in ay isu jirsadaan masaafo aad u gaaban oo ay indhahooda is qaban karaan.
War kasoo baxay Aqalka Cad ayaa lagu sheegay in gabadha uu dhalay Trump oo sidoo kale xil sare ka heysta Aqalka Cad, Ivanka Trump in ay u socdaali doonto dalka Kuuriyada Koonfureed, kana qeybgali doonto ciyaaraha Olimbikada oo dhawaan furmaya.
Dhanka kale gabadha la dhalatay hoggaamiyaha dalka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa lagu soo waramayaa in ay u safrayso dalka Kuuriyada Koonfureed si ay uga qeybgasho furitaanka ciyaaraha deyrta ee dalkaas ka furmaya.
Gabadhani oo saameynteeda badantahay, oo lagu magacaabo Kim Yo-jong ayaa ah gabadha ugu yar qoyska Kim Jong-il oo ah hoggaamiyihii hore ee Kuuriyada Waqooyi.
Lahaanshaha sawirka KCNA
Waxaa la sheegay in uu aabaheed Trump uu ka codsaday in ay ka qeybgasho ciyaaraha.
Ivanka ayaa waxaa la sheegay in ay la shaqaysay guddiga ciyaaraha olimbikada caalamiga ah si sanadka 2028-da ciyaarahaas loogu qabto magaalada Los Angels ee dalka Maraykanka.
Trump iyo Kim ayaa marar badan warbaahinta isaga hanjabay, iyada oo Kuuriya Waqooyi ay Maraykanka ugu hanjabtay in ku garaacayso hubka nuyuukleerka.